१९ बर्सकी ग*र्भव*ती श्री*मतीलाई मा*रेर श्री*मानले गरे सिधा प्रह*रीलाई फोन।। वास्तबिता यस्तो Ranju tamang (भिडियो हेर्नुहोस) - Onlines Time
१९ बर्सकी ग*र्भव*ती श्री*मतीलाई मा*रेर श्री*मानले गरे सिधा प्रह*रीलाई फोन।। वास्तबिता यस्तो Ranju tamang (भिडियो हेर्नुहोस)
August 15, 2021 onlinestimeLeaveaComment on १९ बर्सकी ग*र्भव*ती श्री*मतीलाई मा*रेर श्री*मानले गरे सिधा प्रह*रीलाई फोन।। वास्तबिता यस्तो Ranju tamang (भिडियो हेर्नुहोस)
उदयपुर वेलका नगरपालिका वडा नम्बर ४ माइती भएकी २३ वर्षीया रन्जु तामाङको ह’त्या भएको हो। उनी गर्भवती थिइन्। बुधबार बिहान साढे ७ बजे काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित गुहेश्वरीको एक घरमा ह’त्या भएको महानगरीय प्र’हरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहले जानकारी दिए।
एसएसपी सिंहका अनुसार राम श्रेष्ठले श्रीमतीको घाँ’टी र मुख थि’चेर ह’त्या गरेका हुन्। श्रीमती ओ’छ्या’नमा मृ’त भेटिएकी थिइन्। उक्त आ’रोपमा प्रहरीले मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का ३९ वर्षीय राम श्रेष्ठलाई प्र’हरीले प’क्रा’उ गरेको हो।
उनीहरूले गुह्यश्वरीस्थित बागमती प्लान्ट नजिकै फ्ल्याट डे’रामा लिएर बसेका थिए। उनको श’रीरमा अन्य चो’टपटक भने देखिएको छैन।
उनीहरूबीच बिहान वि’वाद भएको रहेछ। त्यसैक्रममा श्रीमानले श्रीमतीको घाँ’टी थि’चेर ह”त्या गरेका हुन्, घ’टनाबारे राम श्रेष्ठ आफैंले प्र’हरीलाई खबर गरेका थिए।
उनले प्र’हरीको ह’टला’इन नम्बर १०० मा फोन गरी आफूले श्रीमतीको ह”त्या गरेको जानकारी गराएका थिए। एसएसपी सिंहले भने । ह”त्याको खबरपछि महानगरीय प्र’हरी वृ’त्त गौ’शालाबाट प्र’हरी नायब उपरीक्षकसहितको टो’ली घ’टना’स्थल पुगेको थियो। प्र’हरी पुग्दा राम श्रेष्ठ कोठामै चु’कुल लगाएर बसिरहेका थिए। प्र’हरी पुगेपछि मात्रै उनले कोठाको चु’कुल खोलेका थिए।
हे दै*व! हाइटिमा बिहानै गयो निकै शक्तिशाली भु’कम्प,३०४ ज’नाको मृ ‘त्यु,हजारौ घा ‘इते भयो भा’गाभा’ग हेर्नुहोस (भिडियो हेर्नुहोस)
चितवनमा घाँस का’ट्न गएका महत्तोको बाघले खाएको अवस्थामा हा’डखो’र फेला !
मन्दिरको रुख काटेपछि अ*चम्मै भयो, रुख काटेका काका भतिजकै भयो मृ*त्यू , दाङको रिहारमा हेर्नुहोस्
November 21, 2020 November 21, 2020 onlinestime
Congratulations १ रुपैया खर्च नगरी उदाहरणीय बिहे गरेर भा*इरल बन्यो यो जोडी। ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे।
February 19, 2021 February 19, 2021 onlinestime
छोरो लिन आए ,छोरा-बुहारिले घरबाट निकालेपछि रुदै भोकभोकै एक्लै बस्दै आएका बुवा यसरी खुसिहुदै गए (हेर्नुस् भिडियो )
June 24, 2021 onlinestime